Iingcuka kuncwadi. Yinyani, ngokomfuziselo, ihlala inomdla. | Uncwadi lwangoku
Iingcuka kuncwadi. Yinyani, ngokomfuziselo, ihlala inomdla.
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | into engeyonyani yebuchwepheshe, Iincwadi, Inoveli, Inoveli emnyama
Ukufota okungasemva. ©URafael Plaza Aragonés. Ndiyabulela kakhulu.
Ndinjani kwimo? Logan iiveki ezimbini kunye iingcuka zihlala zisefashiniKwakulixesha lokunikezela inqaku kubo. Zimbalwa ezinye izilwanyana inomdla kwaye inoncwadi. Zikumakhulu amabali kunye namabali kuzo zonke iinkcubeko kwaye, ngokungekho sikweni okukhulu, bangezinye zezimntwiso zobubi kunye noloyiko ngokugqwesa. Ngokwenyani, Banobungangamsha, bathembekile kubo ngobomi babo kwaye bahle.
Namhlanje ndiyahlangula Izihloko ezingama-5 ilayibrari yam enomfanekiso wayo, umxholo okanye umxholo njengabalinganiswa abaphambili. Oyena mntu ungumlinganiswa ophambili njengesilwanyana yingcuka yaseGalician evela kuyo Apho iinduli ziyabhombolozanguFrancisco Narla. Kodwa sinayo iklasikhi, izihloko ezibini ezimnyama kunye nenye emnandi.
1 I-Steppe Wolf-Herman Hesse
2 Mnyama kunawe Ucinga- uJack Williamson
3 Ixesha leengcuka-uMartin Cruz Smith
4 Iingcuka - uDonato Carrisi
Ingcungcu inyathela -UHerman Hesse
Ithunyelwe kwi 1927, Le noveli yenye yezona zidumileyo ngumbhali waseSwitzerland-waseJamani UHerman Hesse. Ndiyifundile kwi ukufikisa, njengaye uSiddhārtha. Ke ufunda yonke into kuba ufumanisa iintlobo kunye nezihloko zesalathiso. Kwaye uHesse unemathiriyeli eninzi kuloo meko.
Su UHarry haller" Ukunyibilika, ubukrelekrele, ubungqingqwa, ubushushu kunye noxinzelelo. Kwingxoxo yakhe nombalisi, usibonisa ukungakhathali kwakhe kuluntu olungqongileyo. Soloko naye ithoni yefilosofi uphawu lweHesse, mhlawumbi esinye sezihloko ezinokufundwa kuphela kwiminyaka ethile.
Imnyama kunokuba ucinga -UJack Williamson
Kwakhona funda ebusheni, ndiyayikhumbula ngothando kuba yandichaphazela. Kwaye ndinayo ekuphindaphindeni. Iya kuba ngumzamo kuba kunjalo uhlobo lwefantasy -Ayikho eyam-, kodwa ndiza kuyenza ngaphezulu kwayo nayiphi na intsalela leyo indishiyileyo.
Novela ngumbhali waseMelika uJack Williamson (1908-2006), yapapashwa ngo Umatshini wokushicilela oqinisekileyo Usixelela malunga nokufumanisa kwabo benza kuhambo lobuzwe eMongolia, lukhokelwa nguNjingalwazi uMondrick, xa bafumanisa ukuba kukho inzala ekwaziyo ukutshintsha ibe zizilwanyana, ngokukodwa kwi Iingcuka. UMondrick akazukubuya apho kwaye inkosikazi yakhe kunye nabafundi bakhe abathathu bayaqhubeka nomsebenzi wabo, kodwa ikhona into ebabulalayo. Kwelinye icala, kunjalo intatheli Ngaba barbee, ngubani owaziyo ukuba inokuba yintoni malunga nokuba ikwangubani kwaye yena ngokwakhe unokuthanani nayo.
Ixesha leWolf -Umartin Cruz Smith
Singena mnyama nale isihloko sesihlanu kuthotho lweenoveli ezisibhozo waseMelika uMartin Cruz Smith kwisimilo sakhe, Umkomishinala waseRussia u-Arkady Renko, ngubani inqaku yonke kuye. Kwaye kukhethwe kakuhle ukuba isihloko secala elitsha eliza kukhokelela uRenko ukuba aphande kude kube seChernobyl.
Abo bamaziyo uRenko baya kwazi malunga nokukhethekileyo kwakhe Indalo ibonakala ingakhathali kwaye inyibilikile, i-Russian kwaye inamandla ngexesha elinye. Apha uya kuzifumanisa ubandakanyeka kwimeko enzima yokuma komhlaba onomkhondo onjalo kwaye nalapho kukho iingozi ezoyikisa abantu. Excelente njengalo lonke uthotho, endihlala ndincoma.
Iingcuka -UDonato Carrisi
El Into yaseYurophu yokushicilela kwiminyaka embalwa edlulileyo, le thriller yi Italian Donato Carrisi kakhulu umlutha. Ngandlel 'ithile, waphinda waluvuselela uhlobo ngo isindululo sokuqala Oko kwamenza ukuba afanelekele impumelelo. Ukutsala abalinganiswa kunye nomxholo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, ukujija okukhulu oko kukunika ngakumbi ukumangaliswa.
Umntu wolwaphulo-mthetho Goran gavila kwaye iqela lokubulala lijongene netyala eliphazamisayo. Iingalo zasekunene ezingqinelana amantombazana amahlanu alahlekileyo, kodwa iingalo zi 6. Xa befumana izidumbu ezintlanu kamva, bakholelwa kwelokuba eyesithandathu isaphila. Iqela liza kujoyina UMila Vasquez, umphandi okhethekileyo kwi abantu abalahlekileyo. Kodwa ngalo lonke ixesha becinga ukuba bayasondela kumtyholwa, balandela isicwangciso se- Ikhohlakele kwaye ikrelekrele ingqondo.
Ikhutshwe kunyaka ophelileyo, yiyo Inoveli yokugqibela yembali yombhali ophumeleleyo waseGalikhi UFrancisco Narla. Ukusekwa kumaxesha amaRoma, le inayo njengomphathi wayo ophambili a Ingcuka endala, enkulu nenobuqili, yintoni ezakuthathwa ukuziphindezela ukusweleka kweqabane lakhe ezandleni zeqela lomkhosi.
Uhambo emva kwabo ukuya eRoma nditsho noJulius Caesar ngokwakhe ungomnye wabo ungafuniyo ukuphela. Kwangelo xesha, uzifundela umphefumlo omnye. Kwaye uhlala uthabathe icala lalengcuka lenzakeleyo neyoyikekayo engayi kuyeka de oko kuziphindezela kwenziwe. Nokuba kwenzeka ntoni. Ingayiyo eyona ncwadana inembali ibalaseleyo yonyaka ophelileyo kum, ngesona sicwangciso silungileyo kunye nomxholo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iingcuka kuncwadi. Yinyani, ngokomfuziselo, ihlala inomdla.
Leemos.es, iwebhusayithi yoncwadi yomncinci